Zip Files: Ahoana no hanaparitahana azy amin'ny software?
Zip Files: Mamafaza azy ireo amin'ny software
Mila # WinZip ve aho mba hampiasa pejin-drakitra?
Tsia, afaka mampiasa karazana rindrambaiko maro samihafa ho an'ny zipping files ianao. Tamin'ny 2008, ireo vokatra roa malaza Zipping dia WinZip sy WinRAR. Na ny vokatra dia hisokatra, hamafisina, ary hamorona rakitra Zip ho anao.
Download WinZip eto.
Download WinRAR eto.
Ahoana no hamafako ny rakitra?
Voalohany, mila mandefa sy mametraka rindrambaiko WinZAR na WinRAR rindrambaiko. Raha vao tafapetraka, ny raki-peo arovana dia tokony ho anisan'ny rafitra Windows na Macintosh.
Manokatra anao ny rakitra Zip amin'ny drakitry ny doka. Amin'ny ankapobeny, ny iray amin'ireo fanontana roa dia hiseho avy eo:
"Manapaha na mametraka avy amin'ny rakitra Zip efa misy" ao amin'ny WinZip Wizard. Avy eo ity mpanampy ity dia handeha anao amin'ny alàlan'ny dingana mba hanafangana ireo rakitra.
"Manaisotra ireo rakitra amin'ny ..." ao amin'ny Wizard WinRAR. Tahaka ny rindrambaiko WinZip, ianao dia asaina ho an'ny dingana manaraka. Omeo fotoana maromaro hanaovana ny asany izany, ary efa rava ny rakitrao ho toy ny solonanarana feno. Ampiasao ireo antontan-drakitra ireo tahaka ny andaninao hafa. Raha tianao, dia azonao atao ihany koa ny mamafa ny rakitra Zip voalohany mba hamahana ny toerana.
Ahoana no fomba hamoronako ny rakitra miafiko manokana?
Raha te-hamorona ny antontan-taratasinao Zip ianao, ny tranonkala WinZip dia manana lesona mahasoa indrindra eto. Tahaka ny fitantanana ny fitantanana ny rakitra, dia tsy ho maizina sy hafahafa izany amin'ny voalohany. Fa ny fitantanana ny rakitra dia lasa mora kokoa rehefa mampihatra. Mazotoa manandrana ny lesona amin'ny WinZip etsy ambony.
Misimisy misimisy kokoa momba ny famandrihana rakitra fidirana:
Na dia ankatoavina be aza ny format Zip, dia tsy ny fomba hakana rakitra fotsiny . Misy fomba maro hafa hanangonana rakitra sy horonan-tsarimihetsika. Ny andian-drakitra hafa dia ahitana:
.rar (malaza amin'ny mpilalao amin'ny 2007)
.arj (format taloha, nefa mbola ilaina)
.daa (lasa malaza amin'ny famandrihana horonan-tsary)
Ho lisitry ny format malalaka, midira eto.
FTP - Fichier Transfer Protocol
Adiresy IP Survival IP
Ahoana ny fijerena ny lahatsary fandefasana sandoka
Ahoana no hiarovana ny tambajotra amin'ny loza voajanahary?
Tadiavo ny adiresy IP misy anao ao amin'ny router
Alefaso na afindrao ny rakitra sy ny fisaka fizarana amin'ny Windows
Ebay 101: Taratasy ho an'ny haingon-drivotra eBay
Inona ny 'FLBP'? Inona no dikan'ny FLBP?
10 Best Apps ho an'ny Log Out of 2018 ho an'ny iOS & Android
Inona ny rakitra PSP?
Mandidy ny hanomboka apache amin'ny Linux
Ny tsara indrindra amin'ny toro-hevitra sy toro-hevitra momba ny mailaka
Ahoana ny fomba hahazoana zavatra lehibe amin'ny iPod touch
Ahoana no hanaisotra ny fanitarana sy ny plug-ins ao amin'ny Google Chrome
10 tranonkala izay mamela sary maimaim-poana
Tari-dàlana hanombohana ny BASH - fampitahana zavatra
Dell tsy dia mendrikendron'ny laser-classe E310dw tsy misy vidiny
Ahoana ny fandefasana hafatra avy any amin'ny fonosana evolisiona
10 Fampitandremana aloha ny famantarana ny mpanjifa ratsy
Ny baolina kitra tsara indrindra amin'ny Microsoft sy Super Bowl sy printables
Ny fomba hifandraisana amin'ny olona any Yahoo! Mail
Top 10 Digital Cameras ho an'ny Papa
Ahoana ny fametrahana fitsipika mailaka an-tsoratra Apple
Torolalana amin'ny dingana tsikelikely amin'ny fampidirana ny formula formula Net ao Excel
Ny Top 8 Wii Puzzle Games
Ahoana ny lisitry ny mozika rehetra ao amin'ny Windows Media Library